Noocyada tuubbada birta lagu dhejiyo
J: Tuubada birta ah ee la tuuro waxay ka hortagtaa faafida dabka oo aad uga wanaagsan tuubbada caagga ah maxaa yeelay birta birtu ma guban karto. Ma taageeri doonto dabka mana gubandoonto, iyadoo laga tagayo dalool uu qiiqa iyo ololku kaga soo dhex bixi karaan dhismaha. Dhinaca kale, tuubooyinka guban kara sida PVC iyo ABS, way guban karaan, Dabka ka imanaya tuubbada gubanaysa waa mid xoog badan, qalabkuna waa qaali, laakiin joojinta dabka ee tuubada birta ah ee birta ah, tuubo aan la guban karin, ayaa si fudud loo rakibay. oo aan qaali ahayn.
B: Mid ka mid ah tayada ugu caansan ee tuubbada birta lagu dhejiyo waa cimri dhererkeeda. Sababtoo ah dhuumaha balaastigga ah waxaa lagu rakibay tiro aad u badan tan iyo horaantii 1970s, nolosheeda adeegsiga weli lama go'aamin. Si kastaba ha noqotee, biibiile bir ah ayaa loo isticmaali jiray tan iyo 1500s Yurub. Xaqiiq ahaan, dhuumaha birta ah ee la tuuro ayaa keenayay ilaha Versailles ee Faransiiska in ka badan 300 sano.
J: Tuubbada birta ah iyo tuubbada caagga ah labadaba waxay u nugul yihiin qalabka wax dumin kara. Dhuumaha birta ah ee tuurku wuxuu ku dhacayaa qashin markii heerka pH-ka ee gudaha tuubbada uu hoos ugu dhaco 4.3 muddo dheer, laakiin ma jiro degmo bullaacad oo fayadhowr leh oo Ameerika u oggolaanaysa in wax kasta oo pH ka hooseeya 5 lagu shubo nidaamkiisa ururinta bullaacadaha. Kaliya 5% carrada ku taal Ameerika ayaa u nugul birta, markii la geliyo carradaasna, tuubbada birta lagu tuuro ayaa si fudud oo aan qaali ahayn loo ilaalin karaa. Dhinaca kale, dhuumaha balaastigga ah waxay u nugul yihiin asiidhyo badan iyo dareerayaal waxaana ku dhaawici kara wax soo saarka batroolka. Intaas waxaa sii dheer, cabitaannada kulul ee ka sarreeya 160 digrii waxay dhaawici karaan nidaamyada biibiileyaasha PVC ama ABS, laakiin wax dhibaato ah kuma keenayaan tuubbada birta lagu dhejiyo.